काे हुन् भुटानविरूद्ध ६ गाेल गर्ने कीर्तिमानी सावित्रा भण्डारी? | Suvadin !
राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न थालेकाे दुई वर्षकाे अवधिमा उनी टिमकी नम्बर एक स्ट्राइकर बनिसकेकी छिन्। गत वर्षकाे फागुनमा भएकाे १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उनले गरेकाे दुई गोल नै नेपालका लागि रजत जित्न महत्वपूर्ण बने। समूह चरणमा श्रीलंकाविरुद्धको खेलमा सावित्राले दुई गोल गरेकी थिइन्।
Dec 28, 2016 12:44
भुटानविरूद्धकाे खेलमा बल लैजाँदै सावित्रा भण्डारी। फाेटाे साैजन्य : एन्फा
काठमाण्डाैं, पुस १३
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा एउटै खेलाडीबाट ६ गाेल हुनु दुर्लभ मानिन्छ। त्यही दुर्लभ कीर्तिमान नेपाली खेलाडी सावित्रा भण्डारीले बनाएकी छिन्। भारतकाे सिलगढीमा जारी साफ महिला च्याम्पियनसीपमा भुटानविरूद्ध ६ गाेल स्काेर गर्दै सावित्राले साे किर्तिमान बनाएकी हुन्। सोमबार उद्घाटन खेलमा सावित्राले खेल सुरू भएकाे पाच मिनेटमा गाेल गर्दै खाता खाेलेकी थिइन्।त्यसपछि लगातार ९, २३,३५,७२ र ७७ मिनेटमा गाेल गर्दै उनले ६ गाेल पूरा गरिन्।
नेपाली महिला टाेलीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेदेखि याे पहिलाे घटना हाे, एक खेलाडीले अाधा दर्जन गाेल गरेको यो नै पहिलो हो। यसअघि महिला टिमकी खेलाडीहरूद्वय जमुना गुरुङ र अनु लामाले एउटै खेलमा ४-४ गोल गर्दै सर्वाधिक गाेलकर्ताकाे रेकर्ड राखेका थिए। साेही रेकर्ड ताेडेकी २० वर्षीया सावित्रा भने ६ गाेलपछि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा चर्चामा अाएकी छिन्।
काे हुन सावित्रा ?
नेपाली घरेलु फुटबलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबमा अावद्ध सावित्राले २०७१ सालमा पाकिस्तानमा भएकाे तेस्राे साफ च्याम्पियनसिपबाट अन्तराष्ट्रिय प्रतियाेगितामा डेब्यु गरेकी थिइन्। साे प्रतियाेगितामा खेलेकाे माल्दिभ्सविरुद्धको खेल नै उनकाे पहिलाे अन्तर्राष्ट्रिय खेल हाे।
फुटबलकी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भए पनि उनकाे फुटबलमा प्रवेश भने संयाेग थियाे। लमजुङकी सावित्रा खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि भलिबल तथा एथ्लेटिककी राम्री खेलाडी थिएन्। २०७० सालकाे राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले भलिबलमा काश्यपदक जितेकी थिइन्। ती खेल सँगसँगै नियमित रूपमा स्थानीय स्तरमा फुटबल प्रतियाेगिताहरू पनि खेल्ने गरेकाे उनी बताउँछिन्।
अाफ्नै जिल्लामा जारी स्थानीय प्रतियाेगितामा २०७० सालमा अाकर्षक अात्मविश्वासका साथ फुटबल खेल्दै गरेकाे देखेपछि त्यहाँ पुगेका शुक्र तामाङ (एन्फाका साहयक रेफ्री) काे नजरमा उनी परिन्। जुन जीवनकाे टर्निंङ प्वाइन्ट रहेकाे सावित्राको विश्वास छ। त्यसपछिका दिनहरूमा सावित्राले पछि फर्केर हेर्नुपरेकाे छैन। अवसर खाेजिरहेकी सावित्रासँग केही अनाैपचारिक कुरा गरेर काठमाडाैं फर्किएका शुक्र तामाङकाे सावित्रालाई एक दिन अचानक फाेन अायाे र उनलाई काठमाडाैं खेल्न बाेलाइयाे।
काठमाडाैं अाएपछि सावित्राले अाफूलाई एपीएफकाे महिला टाेलीमा खेल्न बाेलाएकाे थाहा पाइन् र २०७१ साउनमा उनकाे एपीएफसँग सम्झाैता भयाे। यहीँबाट व्यावसायिक रूपमा उनले फुटबल खेल्न सुरू गरेकी हुन्। त्यसपछि एपीएफमा हुने नियमित प्रशिक्षण, म्याच एक्साेजर, मेहनतले अाफूलाई परिपक्व बनाउँदै लगेकाे उनी बताउँछिन्। ‘यसले मलाई राष्ट्रिय टाेलीमा पार्न सहयाेग गर्याे,’ उनले शुभदिनसँग भनिन्। राष्ट्रिय टिममा पहिलाे राेजाइकी खेलाडी बन्दै अाएकी छिन् सावित्रा।
यही पुस २ गते चाैथाे साफ च्याम्पियनसिपकाे तयारीका लागि नेपालले फिफा वरियतामा अाफूभन्दा २६ अाै स्थान माथि रहेकाे मलेसियालाई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न काठमाडाैं डाक्याे। अाफूभन्दा निकै बलियाे मानिएकाे टाेलीलाई बराबरीमा राेक्ने तर जित्न नदिने नेपालकाे लक्ष्य थियाे। तर, सावित्राकाे मनमा भने मलेसियालाई जसरी पनि पराजित पार्नुपर्छ भन्ने थियाे र उनले त्याे सम्भव पनि पारिन्।
अाफूभन्दा निकै अनुभवी खेलाडीहरू टिममा भए पनि अन्त्यमा उनकाे १ गाेलले नेपाललाई महत्वपूर्ण जित दिलायाे। त्यसले चाैथाे साफमा सहभागिता जनाइरहेका सम्पूर्ण नेपाली खेलाडीकाे मनाेबल उच्च बनायाे।